HTC Wildfire E2 na-aga ahịa na-enweghị ọkwa ọkwa Gam akporosis
HTC Wildfire E2 na-aga ahịa na-enweghị ọkwa ọkwa
El HTC Wildfire E2 N'oge na-adịbeghị anya ọ gafere site na njikwa Google Play na-egosi nkọwapụta mbụ ya, ọtụtụ n'ime ha mere ka ọ bụrụ ekwentị mara mma. A ga - akpọ ngwaọrụ a ka ọ bụrụ ọkwa ntinye ntinye ma bụrụ nhọrọ mgbe ị gosipụtara nke ọhụrụ HTC Ọchịchọ 20 Pro na HTC U20 5G ka ọnwa Juun dị.
Ugbu a onye na-ere ahia na Russia na-etinye ya na ire ere na-enweghị ọkwa HTC onwe ya, onye n'oge ahụ edeghị ya na ibe ya Onye nrụpụta ahụ mere atụmatụ ịkpọsa ya na ọnwa a yana ngwaọrụ larịị ọzọ, yabụ ọ dị n'ihu ụdị nke ọzọ.
1 Nke a bụ HTC Wildfire E2 ọhụrụ
Nke a bụ HTC Wildfire E2 ọhụrụ
El HTC Wildfire E2 malite ịnya a 6,22 nke anụ ọhịa ahụ Site na mkpebi HD + (1.520 x 720 pikselụ) nke ụdị IPS LCD, a na-echekwa ya na Gorilla Glass nke ụdị 5. N'ihu ị nwere ike ịhụ ọkwa nke mmiri mmiri nke ọ na-etinye ihe mmetụta 8 megapixel selfie.
Dị ka ụdị ndị ọzọ dị n'etiti na-agbakwunye 22 GHz MediaTek Helio P2,0 processor, 4 GB nke Ram na nchekwa bụ 64 GB. Batrị arụnyere bụ 4.000 mAh na-akwụ ụgwọ site na USB-C, na nke a, ọ ga-anọ na ọsọ ọsọ karịa 10W.
Na azụ nke HTC Wildfire E2 incorporates abụọ anya m, na isi bụ ihe mmetụta 16 megapixel f / 2.2 na autofocus na ikanam Flash na nke abụọ bụ a 2 megapixel omimi mmetụta. E2 na-abịa na gam akporo 10 dị ka ọkọlọtọ na akwa mkpuchi nke onye nrụpụta, yana 4G, Wi-Fi, Bluetooth na njikọ GPS.
IKIRU 6.22-anụ ọhịa IPS LCD (pikselụ 1.520 x 720)
Nhazi Helio P22 8-isi
GPU IkeVR GE8320
GHARA CAMERAS 16 MP Isi ihe mmetụta na ikanam Flash - 2 MP Omimi ihe mmetụta
UMUAKA 4.000 mAh na USB-C na-akwụ ụgwọ
Njikọ 4G - WiFi - Bluetooth - GPS
Mkpụrụ na arọ: 158.4 x 75.9 x 8.95 mm - 173 gram
El HTC Wildfire E2 dị ugbu a ịzụta na Russia maka ego nke RUB 8.760 na Helpix (ihe dị ka euro 100 na ọnụego mgbanwe) Agba dị na nke a bụ acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nakwa na nwa, ha bụ isi nhọrọ abụọ maka ọrịre na peeji nke Russian ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC Wildfire E2 na-aga ahịa na-enweghị ọkwa ọkwa
10 nke kacha mma na-arụ ọrụ nke July 2020
Otu esi rụọ ọrụ ọnọdụ ọchịchịrị na Mbugharị